Itoobiya:Waa nala dhaliili karaa - BBC Somali
Itoobiya:Waa nala dhaliili karaa
6 Nofembar 2015
Ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa u sheegay BBC in uusan ka cabsaneynin dhaleeceyn kaga timaada weriyayaasha,inkastoo dalkiisa dhanka sumcada xoriyatul qowlka ay tahay mid aan wanaagsaneyn.
"Saxaafada xorta ah waxa ay si aad ah muhiim ugu tahay hannaanka dimuqraadiyadda iyo horumarka," waxaa sidaa yiri Hailemariam Desalegn.
Waxa uu ku adkeystay in weriyayaal iyo dadka boggag ku leh goobaha ay bulshada ku wada xiriiraan ee lagu xiray dalkiisa sanadkii hore aysan aheyn weriyayaal dhab ah ayna xiriir la leeyihiin argagaxiso.
Waxaa la laalay eedeymo aragagaxiso oo ka dhan ahaa dad bogogga bulshadu ku wada xiriirto warbxinna ku soo qori jiray oo loogu yeero Zone 9.
Shan ka mid ah ayaa la soo dayaay bishii July, kaddib markii in ka badan sanad ay ku jireen xabsiga ka hor booqashadii Barack Obama ee Afrika, afar kalana waxa ay maxkamad ku weysay eedo aragagaxiso bishii la soo dhaafay.
Laakiin Mr Hailemariam ayaa sheegay in xiridooda aysan shaqa ku laheyn mihnadda ay qabtaan, halka caddeymaha la helay ay muujinayeen in kooxda ay doonayeen in ay khalkhal geliyaan dowladda.
Waxa uu sheegay in arrintan si cad hoosta looga xariiqo sabatana waxa ay tahay buu yiri in aysan jahawareer ku keenin xirfaddan sharafta leh, saxaafadda iyo shaqada ay weriyayaasha u hayaan dalkan.
Waxa uu yiri "waxaan diyaar u nahay in weriyuhu uu noqdaba mid dhalillo noo soo jeediya sababtoo ah mar walba ma nihin kuwa sax ah." Kala duwannaanta Itoobiya waxa ay tahay in dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka ay xuddun u yihiin jiritaankeeda iyo guusha.